संविधान दिवसको अवसर पारी जगन्नाथमा वृक्षारोपण, खेलकुद प्रतियोगिता पनि सञ्चालन
२०७७ असोज ०३ गते शनिबार नजिक न्युज संवाददाता
भलिबल प्रतियोगितामा विद्यालयका प्रअ.टिम प्रथम र गाउँपालिका कर्मचारी टिम द्धितीय भएका छन् । यस्तै घैटो फुटाउने खेलमा कर्मचारीबाट खम्बिर शाही र जनप्रतिनिधि बाट जयसुर बिष्टले जितेका छन् । विजेतालाई पुरस्कार सहीत प्रमाण पत्र पनि वितरण गरिएको रोजगार संयोजक लक्ष्मण जोशीले बताएका छन् ।
एकै वर्ष पाँच जनाको नाम विभुषण पाउनेमा परेको बाजुराका लागि पहिलो पटक हो । विभुषण पाउनेमा नेकपाका नेता, लेखक तथा बिश्लेषक दयालबहादुर शाही, बुढीनन्दा नगरपालिकाका उपप्रमुख सृष्टी रेग्मी, जिल्ला अस्पताल बाजुराका डाक्टर रुपचन्द्र विश्वकर्मा, उपप्रबन्धक बाल कुमार सिंह र हुलाक कार्यालय बाजुराका कार्यालय प्रमुख जंगवीर सुनार रहेका छन् ।
बुढीनन्दामा भीरबाट खसेको ढुंगा लागेर मृत्यु
बुढीनन्दा नगरपालिका ४ कुरुमा एक जना महिलाको ज्यान गएको छ । गाउँ नजिकैको पालछडा भन्ने भीरमाथिबाट आएको ढुंगा लागेर ३२ वर्षकी ओजना दमाइको मृत्यु भएको छ । दमाईको करिब ५० मिटर माथिबाट आएको ढुंगा लागेर घटना स्थलमै मृत्यु भएको हो ।
उसो भए गर्ने के त-खानै छाड्ने? सहरै छाड्ने? तनाव भयो भनेर कामै छाड्ने? होइन। खानपिन र शारीरिक परिश्रमको उचित संयोजन गर्ने। आज यो लेखमा हामी शारीरिक परिश्रमको कुरा गर्नेछौं।
२०७७ असोज ०२ गते शुक्रबार नजिक न्युज संवाददाता
छालालाई स्वस्थ्य बनाउने– हामी छालालाई स्वस्थ्य बनाउनका लागि थरीथरीका सौन्दर्य प्रसाधन प्रयोग गरिरहेका हुन्छौ । राम्रो सौन्दर्य प्रसाधन प्रयोग गर्दैमा छाला स्वस्थ्य एवं चम्किलो हुन्छ भन्ने छैन । यसमा तपाईको दिनचर्या र खानपान मूख्य रुपमा जोडिएर आँउछ ।
प्रेरणादायी र जीवनोपयोगी हुन्छ । त्यसो त महान् व्यक्तिहरुको बुझाई र भोगाई मात्र होइन, सामान्य भनिएका व्यक्तिहरुले पनि आफ्नो अनुभवबाट केही न केही कुरा सिकेर त्यसको सार बताइरहेका हुन्छन् । यहाँ त्यस्तै केही सारभूत भनाईहरु पेश गरिएका छन्, जो हाम्रो लागि प्रेरणादायी हुनसक्छ ।
बुढीनन्दा नगरपालिकामा गर्भवती र सुत्केरी लक्षित उप–प्रमुखको कोशेली कार्यक्रम सञ्चालन
२०७७ असोज ०१ गते बिहिबार नजिक न्युज संवाददाता
बुढीनन्दा नगरपालिकामा नगर उपप्रमुख कोशेली कार्यक्रम सुरु गरेको छ । असोज १ गतेबाट लागु हुने गरी उपप्रमुखको कोशेली कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । नगरपालिका भित्रका हजार दिनका गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरी कोशेली कार्यक्रम सुरु गरिएको उप्रमुख सृष्टी रेग्मीले बताएकी छन् ।
२०७७ भदौ ३१ गते बुधबार नजिक न्युज
२०७७ भदौ ३१ गते बुधबार नजिक न्युज संवाददाता
प्रकाश नेपालीले देउडा गीत मार्फत यसरी सम्झीए साविक आटीचौर गाविसलाई
लामो लम्गाउँ बुढावाडो झन राम्रो ओलीगाउँ वर्षदिन छुट्याको प्रिती आज मुख बोलीझाँउ
२०७७ भदौ २९ गते सोमबार नजिक न्युज संवाददाता
२०७७ भदौ २७ गते शनिबार नजिक न्युज संवाददाता
२०७७ भदौ २६ गते शुक्रबार नजिक न्युज संवाददाता
कार्यक्रममा गजलकार प्रदीप रोदन, मुक्तककार सन्तोष अम्गाई, गजलकार हिक्मत शाही क्षितीज, गीतकार तथा कवि राजेन्द्र शाह वीपी, साहित्यकार हर्क खडायत, कृष्ण ओली अविरल, चर्चित गायीका रेखा जोशी पनि अतिथि वाचन श्रष्टाका रुपमा सहभागि हुने आयोजकले बताएको छ ।
के हो गर्भाधान संस्कार ?
२०७७ भदौ २५ गते बिहिबार नजिक न्युज संवाददाता
अर्थात् विधिपूर्वक संस्कारयुक्त गर्भाधानले राम्रो र सुयोग्य सन्तान उत्पन्न हुन्छ । यस संस्कारले वीर्यसम्बधी पापको समेत नाश गर्न मद्दत गर्छ । यही नै गर्भाधान संस्कारको फल हो ।
कोरोना संक्रमितको संख्या ५० हजार नाघ्यो : ३१७ जनाको मृत्यु
२४ घण्टामा १२ सय ४६ संक्रमित थपिएका छन्। अहिले क्वारेन्टाइनमा ५ हजार ८०६ जना रहेका छन्। २४ घण्टामा १८ सय १९ जना डिस्चार्ज भएका छन्। योसँगै कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या ३५ हजार ७ सय पुगेको छ।
२०७७ भदौ २५ गते बिहिबार रासस
उनका अनुसार नगरका १४ वडामा हालसम्म पहिचान भएका २३५ गर्भवती र १६५ डेढ महिनाका सुत्केरीको पहिलो चरणमा निःशुल्क कोभिड–१९ बीमा गरिनेछ। प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत छुटमा रु एक लाखको बीमा हुने जनाइएको छ।
२०७७ भदौ २४ गते बुधबार नजिक न्युज संवाददाता
अहिले चिकित्सक डा. अधिकारी दैनिक बिरामी र कोरोना सङ्क्रमितको सेवामा व्यस्त छन् । दुई जना चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि जिल्ला अस्पताल मनाङमा दरबन्दीका चिकित्सक एक जना पनि छैनन् । अहिले भएका चिकित्सक पनि करारका हुन् ।